Cilmi-baadhis ku saabsan falanqaynta qiimaha wax-soo-saarka iyo xakamaynta shubista maalgashiga | Yingyi
Maal-gashiga maal-gashiga wax soo saarka inta badan waxaa ka mid ah afar hab: diyaarinta module, diyaarin qolof, dhalaalid daawahaiyo tuurista daaweynta ka dib. Sababtoo ah habka geeddi-socodka ma aha oo kaliya habab kala duwan, qulqulka alaabta Complex, wareegga wax soo saarka dheer, iyo habka shubista waa mid aad u xirfad leh. Sidaa darteed, isticmaalka agabka wax-soo-saarka min gelinta ilaa wax-soo-saarku maaha mid dareen leh oo cad, kala duwanaanshaha isticmaalkuna waa mid adag oo caddadkana ma fududa Isla mar ahaantaana, sababtoo ah habka wax-soo-saarka kala duwan ee wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka, iyo sidoo kale korodhka Maalgelinta ka-saarista boodhka iyo ilaalinta deegaanka, waxay keentay maal-gelinta maalgashiga falanqaynta qiimaha ganacsiga iyo xakamaynta kharashka Nidaamku aad ayuu u adag yahay.
1. Halabuurka aasaasiga ah ee kharashka wax soo saarka ee shirkadaha shubista maalgashiga
Kharashka wax-soo-saarka maal-gelinta maalgelinta waxa loola jeedaa qiimaha tooska ah ee la xidhiidha wax-soo-saarka iyo hawl-galka shirkadaha Kharashka wax-soo-saarka ee maal-gashigu wuxuu u qaybsan yahay kharashka alaabta, kharashka shaqada tooska ah iyo kharashka wax-soo-saarka. Kharashyada deegaanka ayaa si gaar ah loogu daraa kharashyada wax-soo-saarka maal-gelinta.
1.1 Qiimaha alaabta
Qiimaha alaabta tooska ah ee ay isticmaalaan shirkaduhu habka wax soo saarka ayaa si wadajir ah loo tixraacaa sida qiimaha alaabta, kaas oo loo qaybin karo alaabooyin cayriin oo kala duwan iyo alaabta muhiimka ah ee ka kooban qaybta ugu muhiimsan ee alaabta iyadoo loo eegayo shaqooyin kala duwan. Shidaalka iyo tamarta uu isticmaalo habka; Marka lagu daro qaybta ugu muhiimsan ee badeecada, ama gacan ka geysata samaynta alaabta iyo isticmaalka alaabta caawimada.
1.2 Shaqada tooska ah
Waxa loola jeedaa mushaharka iyo daryeelka shaqaalaha wax soo saarka ee sida tooska ah uga qayb qaata wax soo saarka.
1.3 Kharashaadka Wax-soo-saarka
Waxa loola jeedaa kharashaadka maamul ee kala duwan ee ay gasho qayb kasta oo wax soo saar ah oo ka mid ah shirkadaha maalgelinta samaynta ee abaabulka iyo maaraynta wax soo saarka, iyo sidoo kale kharashyada dayactirka iyo qiima dhaca mishiinnada iyo qalabka.
1.4 Qiimaha Tayada
Qiimaha tayada waxaa loola jeedaa wadarta qiimaha ganacsiga si loo hubiyo heerka wax soo saarka ee la cayimay iyo guud ahaan maareynta tayada, iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay gaari la'aanta heerka tayada ee la cayimay.
1.5 Kharashyada Deegaanka
Qiimaha deegaanka waxaa loola jeedaa kharashka la qaaday ama looga baahan yahay in la qaado tillaabooyinka saamaynta wax-soo-saarka deegaanka ku yeelanayo iyadoo la raacayo mabda'a mas'uul ka ah deegaanka, iyo sidoo kale hirgelinta ujeedooyinka deegaanka ee shirkadaha Kharashyada kale ee lagu bixiyo heerarka iyo shuruudaha inta badan waxaa ka mid ah dhinacyadan soo socda 1) kharashka yaraynta qiiqa wasakhaysan (2) kharashka soo-kabashada, dib-u-isticmaalka iyo daadinta (3) kharashka wax iibsiga cagaaran (4) kharashka maaraynta deegaanka (5) kharashka hawlaha bulshada ee ilaalinta deegaanka (6) kharashka khasaaraha deegaanka
2. Maalgashiga wax soo saarka wax soo saarka kharashka xisaabinta
Qiimaha alaabtu waa qaybta ugu muhiimsan ee kharashka maalgelinta maalgelinta. Wax-soo-saarka dhabta ah ee shubista, dufcaddii maaddooyinka inta badan waxaa isticmaala noocyo kala duwan oo shub ah. Sida agabka looga dhigo mid macquul ah
Isku-darka iyo qaybinta alaabooyinka kala duwan ayaa mudan in laga fekero. Marka loo eego habka socodka wax-soo-saarka maalgelinta, kharashka alaabta waa la soo ururin karaa oo loo qaybin karaa isticmaalka caaryada iyo caaryada Maaddada, isticmaalka kharashka 3 dhinacyada ugu muhiimsan.
2.1 Isticmaalka caaryada
Marka la samaynayo maalgelinta, walxaha dhinta dib ayaa loo warshadayn karaa. Cunista caaryada ee wax soo saarku waxay inta badan ka kooban tahay lumitaanka soo kabashada iyo luminta shumac haraaga ah. Marka habka farsamaynta caaryada uu asal ahaan go'an yahay, waa la qiyaasi karaa Xisaabi kootada isticmaalka iyo xisaabinta kharashka.
2.2 Nooca qolof isticmaalka alaabta
Qalabka qolofka waxaa ka mid ah budada refractory, ciid, binder iyo wixii la mid ah. Alaabta ceeriin ee loo isticmaalo samaynta qolofka waxay la xidhiidhaan dusha sare ee qolofka. Marka walxaha qolofka, lambarka lakabka daahan iyo habka la hubo, waxaad isticmaali kartaa caaryada aagga dusha kooxda ama nooca miisaanka qolof si aad u qoondayso kharashka alaabta.
2.3 Kharashka isticmaalka
Qalabka birta ah ee shubista maalgashiga ayaa dhalaalay si waafaqsan foornada. Marka la xisaabinayo gelinta kharashka, foornada waxaa loo qaataa unug ahaan, iyo maaddooyinka birta ah iyo tuurista foornada kasta waxaa loo diiwaangeliyaa si waafaqsan "lambarka foornada" Noocyada iyo tirada.
2.4 Xisaabinta qiimaha alaabta tuurista
Iyada oo loo marayo xisaabinta kor ku xusan, waxaan xisaabinay qiimaha khasaaraha caaryada ee nooc gaar ah oo ka mid ah shubista hal badeeco, qiimaha alaabta qolof la isticmaalo ee wax soo saarka ee alaabta hal iyo qiimaha alaabta biraha unit.
3. Siyaabaha lagu xakameynayo kharashka wax soo saarka ee shirkadaha maalgelinta samaynta
Dhammaan maalgelinta wax-soo-saarka wax-soo-saarka kharashka alaabta ayaa ah saamiga ugu weyn iyo saameynta, sidaas darteed xakamaynta kharashka alaabta ayaa diiradda saaraya dhammaan xakamaynta kharashka. Guud ahaan, shaqada tooska ah iyo kharashka wax-soo-saarka ayaa saameyn yar ku leh qiimaha wax-soo-saarka, laakiin xaaladaha gaarka ah, qiimaha tayada iyo kharashka deegaanka, sida heerka wax-soo-saarka habka iyo heerka diidmada, ayaa sidoo kale saameyn weyn ku leh saameynta qiimaha wax-soo-saarka. Qodobbada saameeya qiimaha wax soo saarka ee shirkadaha, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo tallaabooyin xakameyn la beegsanayo.
3.1 Iska yaree isticmaalka alaabta
Wax-soo-saarka dhabta ah, agabka ku jira kootada geeddi-socodka waa in la diyaariyaa oo loo qaybiyaa si waafaqsan qorshaha wax-soo-saarka, iyo agabka aan sida tooska ah loogu isticmaalin wax-soo-saarka badeecadda ee aan ku jirin kootada isticmaalka waa in tallaabo-tallaabo loo eegaa qaybinta Dufcaddii, iyadoo la kaydinayo agabka goobta hagaajinta heerka isticmaalka walxaha, iyadoo la wanaajinayo habka si loo fuliyo saamiga sayniska iyo macquulka ah ee agabka, si loo yareeyo saamiga hal-abuurka alaabada cusub Qiimaha.
3.2 Hagaajinta wax-soo-saarka geeddi-socodka oo yaree heerka diidmada tuurista
Naqshadeynta habka iyo maareynta goobta ayaa ah labada arrimood ee ugu waaweyn ee saameeya wax-soo-saarka geeddi-socodka. Dib-u-habaynta habka waa in lagu fuliyaa iyada oo loo marayo xaqiijinta habka ka hor maalgelinta ballaaran iyo tababarka naqshadeeyayaasha habka tayada sare leh Hal-abuurnimo, si loo hagaajiyo waxqabadka alaabta iyo habka wax-soo-saarka, dhimista qiimaha alaabta. Iyada oo la wanaajinayo saxnaanta shubka ee shubka iyo wanaajinta habka goobta, heerka isticmaalka dareeraha daawaha waa la wanaajin karaa. Hagaajinta maamulka goobta
3.3 Keydi tamarta oo yaree isticmaalka tamarta
Isticmaalka tamarta ee warshadaha aasaasiga ah ayaa xisaabiya 23% ~ 62% isticmaalka tamarta ee warshadaha mishiinada. Isticmaalka tamarta inta badan waa kookaha, dhuxusha iyo korontada, oo ay ku xigto hawo ciriiri ah, ogsijiin iyo biyo. Warshadaha aasaasiga ah ee Shiinaha Waxtarka tamarta waa kaliya 15% ~ 25%. Tusaale ahaan, qalabka dhalaalinta iyo isticmaalka tamarta dhalaalinta ayaa ah qiyaastii 50% isticmaalka tamarta dhammaan wax soo saarka wax-soo-saarka. Hagaajinta qalabka dhalaalidda gadaal waxay yarayn kartaa isticmaalka tamarta wax soo saarka wax-soo-saarka furaha.
3.4 Xoojinta ilaalinta deegaanka iyo horumarinta daaweynta iyo dib u warshadaynta qashinka tuurista
Dib-u-warshadaynta qashinka kaliya ma dhimayso luminta alaabta ku habboon, laakiin sidoo kale waxay si toos ah u dhimaysaa kharashka. Isla mar ahaantaana, marka laga eego dhinaca qiimaha deegaanka, dhibaatada daaweynta qashinka waxay ku jirtaa kaydinta kharashka sida daaweynta ugu dambeysa iyo dib u warshadaynta qashinka qashinka ee la nadiifiyo ka dib marka la tuuro qolofka, kharashka badbaadinta, yaraynta qashinka tamarta iyo yaraynta wasakhowga deegaanka.
3.5 Hagaajinta wax soo saarka shaqada
Kordhinta wax soo saarka Shaqaaluhu waxay yarayn kartaa kharashyada joogtada ah unug kasta oo badeecad ah. Hagaajinta wax soo saarka shaqada, waa lagama maarmaan in si joogto ah loo hagaajiyo heerka wax soo saarka makaanikada, isticmaalka tignoolajiyada cusub, Habka cusub, si loo gaaro takhasus.
Waqtiga boostada: Agoosto-26-2021